Iincwadi zeThermorecetas- iincwadi zeeresiphi zeThermomix
Iincwadi zokupheka zeThermomix: zonke iincwadi zeThermomix
KwiThermorecetas silungiselele uthotho lwe iincwadi eziza kukufundisa indlela yokufumana okuninzi kwiThermomix yakho. Kuzo zonke uya kufumana iiresiphi ezikhethekileyo zokupheka izitya ezimnandi kakhulu onokumothusa ngazo usapho kunye nabahlobo bakho. Siza kuqhubeka nokusebenza kwiincwadi ezintsha, Hla umamele!
- Veza iiresiphi 2: iiresiphi ezingaphantsi kwama-30 '
Iindlela zokupheka ezingama-40 kunye nezitya eziphambili ezimnandi, amacala amangalisayo kunye nokutya okumnandi okulungiselelwe kungaphantsi kwemizuzu engama-30 kwaye kufanelekile kuwo onke amalungu osapho. [Olunye ulwazi]
Iiresiphi ezingama-40 zedessert kunye neThermomix
I-40 izitya zepastry ezintle ngamaqebengwana, iimuffins kunye nee-bundtcakes, kunye nee-crostatas, crumbles, cookies kunye ne-puff pastries kunye nokukhethwa okukhulu kweekeyiki kunye ne-crepes. [Olunye ulwazi]
Iiresiphi ezili-100 zokutya okusempilweni kunye nokulinganayo, apho ezingama-40 zezona ziphumelele kakhulu kwibhlog kwaye i-60 eseleyo ayishicilelwanga ngokupheleleyo. [Olunye ulwazi]
-Incwadi yokupheka yeThermomix
Kule ncwadi unokufumana Iiresiphi ezili-100 ukulungiselela ngeThermomix yakho oya kuthi ngayo wothuse abahlobo bakho kunye nosapho. [Olunye ulwazi]
- Veza iiresiphi ngeThermomix
Yenzelwe bonke abantu abangenalo ixesha kwaye abangafuni ukuncama ukutya okugqibeleleyo, okusempilweni kunye nokulinganayo. [UOlunye ulwazi]
-Izidlo ezikhethekileyo ngeThermomix
Iiresiphi ezingama-32 zabantu abane ukunyamezelana kokutya okanye ngubani okhetha ukulandela izidlo ezikhethekileyo ezinje nge vegan okanye imifuno. [UOlunye ulwazi]
- Ukubhloga kunye nokupheka incwadi yobumbano
39 zokupheka for Nceda i-HelpAge International Foundation Ukuxhasa ngemali iiprojekthi zabo e-Ethiopia kunye nokulwa indlala nentlupheko. [Olunye ulwazi]
THENGA IINCWADI- € 5
Iiresiphi zeKrisimesi zeThermomix
Las Eyona ndlela yokupheka yeKrisimesi yeThermomix ibonakale kwibhlog ngoku iqokelelwe kwi-ebook enokukhutshelwa simahla.
Unokuzikhuphelela incwadi yeresiphi yeKrisimesi kukhululeka ngokupheleleyo ngokusinceda ukuba sabelane ngayo kwimidiya yoluntu.
Ukuba ujonge ngaphezulu Iincwadi zeThermomix Kule khonkco uza kufumana zonke ii-eBooks zethu, iincwadi ezikwifomathi ebonakalayo kunye neencwadi ezisemthethweni zeThermomix ezipapashwe nguVorwerk.